Edmonton hantida maguurtada ah
Sida loo abuuro qorshe hawleed
Iibsashada guri waxay noqon kartaa walaac, waxaana la fahmi karaa in qaar ka mid ah milkiilayaasha guryaha ay dareemaan inay ka adag yihiin waxa ay tahay inay sameeyaan ka hor inta aysan saxiixin xariiqaas dhibco leh. Haddaba sidee ayaad u hubin kartaa inaad wax walba ku sii socoto oo aad habaysan tahay inta aad guri cusub raadinayso? Fudud: Iyada oo leh qorshe hawleed.
Intee guri ayaad awoodi kartaa?
Maaha wax aan caadi ahayn in iibsadayaasha guryaha ay ku dhacaan jacayl hanti qaali ah. Rabitaanka waa la fahmi karo: Waa gurigaaga riyada, oo hadda waad awoodi kartaa! Laakin ka hor inta aanad wax soo bandhigin, u fiirso inta ka mid ah dakhligaaga lagu cuni doono bixinta amaahda guryaha, cashuuraha guryaha iyo kharashyada kale. Haddii ay soo baxdo in aad si dhib yar ku bixin karto waxyaabaha daruuriga ah ee amaahda guryaha, waxaa laga yaabaa inay fiican tahay inaad raadiso wax ka jaban.
Helitaanka horay loogu oggolaaday amaahda guryaha
Kahor intaadan bilaabin raadinta gurigaaga riyada, waxaa muhiim ah in horay loogu oggolaado deyn deyn ah. Oggolaanshaha hore ee amaahda guryaha ayaa ku ogeysiin doona inta guri ee aad awoodid waxayna kaa caawin doontaa inaad si kalsooni leh u bixiso wax ku saabsan hantidaas ku habboon. Si loogu oggolaado amaahda guryaha, kala hadal bangigaaga ama deyn bixiyaha wixii ku saabsan in horay loo oggolaado - waxay ku ogeysiin doonaan inta guri ee aad awoodid, oo ku saleysan dakhliga iyo saamiga deynta.
Anoo eegaya guryaha ugu badan ee suurtogalka ah
Waa muhiim inaad aragto guryaha ugu badan ee suurtogalka ah markaad raadinayso gurigaaga riyada. Marka qiimuhu kordho, waxaa jiri doona cadaadis aad u badan si aad si dhakhso ah go'aan uga gaartid - taas oo aan waligood ku habboonayn, gaar ahaan haddii aad ku cusub tahay iibsashada hantida maguurtada ah. Inta badan ee aad wax soo iibsanayso, waxa aad si fiican u qalabaysan doontaa aqoonta ku saabsan waxa guriyaha loo iibinayo iyo meelaha ay leeyihiin sifooyin wanaagsan. Tani waxay ka caawin doontaa iibsadayaasha inay bixiyaan lacag dheeraad ah hoygooda cusub.
Go'aaminta sifooyinka aad ka rabto gurigaaga cusub
Haddii aad iibsanayso ama iibinayso, ogaanshaha waxaad rabto - iyo sababta - waa muhiim. Xitaa haddii aad la shaqeyneyso wakiil, waa muhiim inaad fahamto baahiyahaaga iyo rabitaankaaga. Sidan, wakiilkaagu wuxuu kaa caawin karaa hubinta in baahiyahaas la daboolay inta lagu jiro gorgortanka. Fikradda halkan ma aha oo kaliya in aad naftaada u gasho ama ka baxdo guriga sida ugu dhakhsaha badan; balse, waxay ku saabsan tahay in la helo mid kuu shaqayn doona muddo dheer.
La gorgortanka iibiyeyaasha
Kahor intaadan furin wax soo jeedin ah oo rasmi ah, waxaa haboon inaad fahanto waxa guryaha iyo qiimayaasha lagu iibinayay agagaarkaaga. Wakiilkaaga gurigu waa inuu awoodaa inuu ku siiyo comps (guryaha la barbar dhigi karo) bilaash. Markaad hesho macluumaadkaas, waxaad u isticmaali kartaa sidii faa'iido marka aad la xaajoonayso iibiyeyaasha.
Mcconachie Real Estate For Sale
MLS® # E4294364
Courtesy of Courtesy Of Ryan Dutka Of RE/MAX River City
17612 58 Street Nw, Edmonton
MLS® # E4293673
Courtesy of Courtesy Of Deborah Schindel Of FairSquare Group Realty
# 110 1060 Mcconachie Boulevard Nw, Edmonton
MLS® # E4293499
Courtesy of Courtesy Of Aman Powar-Grewal Of Royal Lepage Arteam Realty
6531 176 Avenue Nw, Edmonton
MLS® # E4293470
Courtesy of Courtesy Of Jennifer Wong Of Exp Realty
17605 60a Street Nw Nw, Edmonton
MLS® # E4293450
Courtesy of Courtesy Of Matteo Saccomanno Of RE/MAX River City
1196 Mcconachie Boulevard Nw, Edmonton
MLS® # E4293410
MLS® # E4293384
Courtesy of Courtesy Of Darcy Joubert Of Royal LePage Noralta Real Estate
6116 173 Avenue Nw, Edmonton
MLS® # E4293337
Courtesy of Courtesy Of Timothy Baker Of RE/MAX Real Estate
17310 65a Street Nw, Edmonton
MLS® # E4293062
Courtesy of Courtesy Of Amanda Bonini Of RE/MAX River City
1087 Mcconachie Boulevard Nw, Edmonton
MLS® # E4293047
Courtesy of Courtesy Of Gurpreet Ghatehora Of RE/MAX River City
17543 61 Street Nw, Edmonton
MLS® # E4293035
Courtesy of Courtesy Of Lakhwinder Brar Of RE/MAX River City
MLS® # E4292979
MLS® # E4292867
Courtesy of Courtesy Of Jigo George Of Royal Lepage Summit Realty
6507 173 Avenue Nw, Edmonton
MLS® # E4292747
Courtesy of Courtesy Of Kimberly Graham Of RE/MAX River City
1325 Mcconachie Boulevard Nw, Edmonton
MLS® # E4292436
MLS® # E4292417
Courtesy of Courtesy Of Sagar Dasaur Of Royal LePage Noralta Real Estate
6044 168 Avenue Nw, Edmonton
MLS® # E4292208
5963 168 Avenue Nw, Edmonton
MLS® # E4291573
Courtesy of Courtesy Of Steven Daniele Of RE/MAX River City
MLS® # E4291330
MLS® # E4290860
Courtesy of Courtesy Of Parmjeet Gill Of Century 21 All Stars Realty Ltd
16713 61 St Nw Nw, Edmonton
MLS® # E4290797
Courtesy of Courtesy Of Brad Williamson Of Royal Lepage Arteam Realty
# 110 274 Mcconachie Drive Nw, Edmonton
MLS® # E4290740
Courtesy of Courtesy Of Kit Yu Of Initia Real Estate
16814 64 Street Nw, Edmonton
MLS® # E4290628
Courtesy of Courtesy Of Eyad Seifeldin Of Rimrock Real Estate
17528 59 Street Nw, Edmonton
MLS® # E4290620
Courtesy of Courtesy Of Marco Urso Of The Foundry Real Estate Company Ltd
6007 167a Avenue Nw Nw, Edmonton
MLS® # E4290507
Courtesy of Courtesy Of Avneet Kaur Hehar Of Royal Lepage Arteam Realty
17031 65 Street Nw, Edmonton
MLS® # E4289842
Courtesy of Courtesy Of Jim Erickson Of Realty ONE Group Metro
# 401 270 Mcconachie Drive Nw, Edmonton
MLS® # E4289831
Courtesy of Courtesy Of Rebecca Giesbrecht Of The Good Real Estate Company
# 411 1070 Mcconachie Boulevard Nw, Edmonton
MLS® # E4289679
17903 59 Street Nw, Edmonton
MLS® # E4289617
Courtesy of Courtesy Of John Rota Of Royal Lepage Arteam Realty
6226 172a Avenue Nw, Edmonton
MLS® # E4289548
Courtesy of Courtesy Of Shelly Shumaker Of CENTURY 21 REWARD REALTY
17606 64a Street Nw, Edmonton
MLS® # E4289076
Courtesy of Courtesy Of Matthew Harrison Of MaxWell Challenge Realty
16904 54 Street Nw, Edmonton
MLS® # E4288707
Courtesy of Courtesy Of Faisal Rajan Of MaxWell Progressive
17016 64 Street Nw, Edmonton
MLS® # E4288280
Courtesy of Courtesy Of Harj Gill Of MaxWell Polaris
6026 167c Avenue Nw, Edmonton
MLS® # E4288218
Courtesy of Courtesy Of Ken Dumas Of TriUrban Inc
17929 62a Street Nw, Edmonton
MLS® # E4287971
Courtesy of Courtesy Of Lori Hunt Of RE/MAX River City
17211 62 Street Nw, Edmonton
MLS® # E4287957
# 423 270 Mcconachie Drive Nw, Edmonton
MLS® # E4287755
# 404 274 Mcconachie Drive Nw, Edmonton
MLS® # E4287706
950 Mcconachie Boulevard Nw, Edmonton
MLS® # E4287637
Courtesy of Courtesy Of Paolo Chiaselotti Of MaxWell Progressive
6127 175 Avenue Nw, Edmonton
MLS® # E4287425
# 210 270 Mcconachie Drive Nw, Edmonton
MLS® # E4287122
MLS® # E4286500
Courtesy of Courtesy Of Steve Lount Of Century 21 All Stars Realty Ltd
973 Mcconachie Boulevard Nw, Edmonton
MLS® # E4286304
Courtesy of Courtesy Of Tushar Bhutani Of Re/Max Excellence
1025 Mcconachie Boulevard Nw, Edmonton
MLS® # E4286164
Courtesy of Courtesy Of Judith Rimmer Of Re/Max Excellence
MLS® # E4285991
Courtesy of Courtesy Of Serge Bourgoin Of Exp Realty
# 37 450 Mcconachie Way Nw, Edmonton
MLS® # E4285882
# 317 1060 Mcconachie Boulevard Nw, Edmonton
MLS® # E4285688
Courtesy of Courtesy Of Sant Sharma Of MaxWell Polaris
16711 62 Street Nw, Edmonton
MLS® # E4285226
Posted by Eric Beaverford on February 26th, 2022
Edmonton hantida maguurtada ah (1)
Listing information last updated on May 18th, 2022 at 4:16am MDT.